MACLUUMAADKA TARANKA JACK CHI DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Jack Chi Dog iyo Sawirro
Chihuahua / Jack Russell Terrier Isku-dhaf ah Eeyo
Cici the Jack Chi oo 1 sano jir ah— 'Cici waa jacaylka noloshayda. Iyadu waa caqli badan, si fiican u tababaran, jecel iyo weyn leh carruurta ... xo '
Jack Chi ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Chihuahua iyo Jack Russell Terrier . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Jack Chi
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Jack Chi
Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee naqshadeeye®= Jack Chi
Ellie the Jack Chi oo 5 jir ah— 'Ellie waa 5 jir Jack Chi, waana hubnaa inay tahay bisad ku xayiran eeyga jirkiisa iyadoo la siiyay farqiga u dhexeeya dabeecaddeeda caadiga ah ee jaallaha badan iyo dabeecaddeeda iyo sass markii ay feisty yeelato. Waxay kuxirantahay xafiiska Google had iyo jeer halkaas oo ay jeceshahay inay ku xoqdo caloosha oo ay la ciyaarto E-eeyada kale ( Jir & Moose ). Iyadu waa eey samatabbixin ah runtiina waxaan ku garaacnay Ghanna iyada ma codsan karno in lagu daro qoyskeenna! '
Waxaan hayaa Jack Chi oo aan ka soo badbaadiyey deris aan xanuunsanayn. Waan jeclahay bisadaha mana jeclayn eeyaha ilaa aan la kulmay eeygan go'aansaday. Wuu i xushay. Eygan kaligey igama tegi doono markaan booqdo saaxiibkay, illaa uu saaxiib iga dhigto. Jawaab ma uu siin lahaa. Waxaan bilaabay inaan ku maro socodkiisa sababtoo ah saaxiibkay si dhib leh kuma haysto banaanka. Kadib saaxiibkay wuxuu kasii waday cabashadiisa inay nasasho uga baahan tahay isaga. Waxay tiri kaaliyeheeda ayaa sii waday balanqaadka ah inuu qaadan doono isaga maalmo kooban, laakiin waligiis ma sameyn. Ugu dambeyn maalin maalmaha ka mid ah markii ay cabanaysay, waxaan waydiiyay inay iyadu rabto inay ii qaadato dhawr maalmood, waan yeelay, markaa iyadu ma rabin inay dib u soo noqoto. Ugu dambayn maalin maalmaha ka mid ah ayay tidhi, '100 $ ayaan kaaga iibin doonaa'. Waxaan ugu jawaabay, 'Ma qoraal baad ku qori doontaa oo rasiid miyaa la siin doonaa?' waxay tiri, 'Dhib malahan' hadana waxaan haystaa sanad. Ma uusan lahayn wax tallaal ah ama baaritaanno caafimaad ah, sidaa darteed taasi waxay ahayd wixii iigu horreeyay ee aan sameeyo. Wuxuu culeyskiisu ahaa 5.8 rodol waxaana ku dhacay shuban. Marka wuxuu qaatay tallaalkiisa oo ay ku jiraan raabiyada, wuxuu lahaa meds si loo baabi'iyo dulin ka dibna qalbi-xanuun. Wuxuu hadda culeyskiisu yahay ku dhowaad 8 rodol. Isagu waa mid Caqli badan oo firfircoon, laakiin wuxuu jecel yahay inuu meel walba i raaco oo uu ila jiifo haddii aan jiifo. Qof walba wuu jecel yahay. U jilicsan yahay carruurta . Wuxuu leeyahay dareen ur urineed wuxuuna jecel yahay inuu wax walba urto. Waqti kasta oo aan wax cuno. Wuxuu ubaahan yahay inuu dhabteyda ka boodo kadib ama intaan wax cunayo si uu u helo qiiq tayda ah neef . Isagu ma doonayo cuntada ... laakiin wuxuu rabaa inuu urin. Aad buu u uraya oo dabcan wuu jecel yahay dabagalo geedo . Badanaa isagu waa mid aad ufiican oo adeeca. Waan kaxeynayay meelkasta oo dukaamada ka mid ah cidina wax iima oran diidmo, ka dib waxaan ogaaday inay sharci daro tahay eey kasta oo aan ka aheyn eeyaha adeega inuu tago meherad kasta oo cuntada lagu iibiyo. Marka anigu ma sii qaadi karo wax badan, laakiin waxaa loo oggol yahay inuu ii tago dhakhaatiirta waxayna ii sheegeen inuu si wanaagsan u dhaqmayo oo la soo dhaweynayo waqti kasta. Runtii waan jeclahay eeygan waxaanan u maleynayaa inuu u yahay tijaabo wanaagsan isku darka Jack Chi. Waa halyeeyo, tamar sare, wax weydiya, eey soo jiidasho leh. '
'Tani waa Bojangles aka Bo-Bo. Waxaan dhawaan ka qaadanay bulshada bini aadamka. Isagu waa mid ka mid ah eeyaha ugu fiican ee aan rajeyn karo. Isagu si dhib yar uma ciyo ilaa uu arko bisad ama qof uusan aqoon. Waxa kaliya ee uu calaliyo waa toy-ga yar ee uu calaliyo wuxuuna ka jawaabayaa dhawaq gaar ah oo aan sameeyo oo ah calaamadda 'kaalay halkan'. Xawaarihiisu wuu iga yaabiyey markii iigu horreysay. Xariggiisu wuxuu ka siibtay gacantayda markii aan eryanayay bisad waxayna ahayd dhib isku dayaya inay soo qabato, in kasta oo uu istaagay markii bisadu kaynta gashay. Waxaan dhawaan iibsanay a Chihuahua eey iyo in cabbaar ah oo uu ciyaarayo jacayl adag, Bo-Bo wuxuu u yimid inuu aqbalo oo uu u dhaqmo sidii qof waalid ah oo ka tirsan Onyx-keena yar Waa xubin qoys oo cajiib ah. '
Ellen the Jack Russell / Chihuahua isku darka 4 sano jir
mini dachshund madow iyo tan
Eeg tusaalooyin badan oo Jack Chi ah
Jack Chi Sawirada 1
Jack Chi Sawirada 2
Jack Chi Sawirada 3
Jack Chi Sawirada 4
jack russell iyo qas qas
Dahab dahab ah oo kuleylka ah ee isku-dhafan ee isku-dhafan eey iib ah
raadinta eyda astaamo ahaan
pitbull isku qasan jack russell